Relikan'i Mb Terezy sy Olontsambatra Louis ary Zélie Martin - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Relikan'i Mb Terezy sy Olontsambatra Louis ary Zélie Martin
Indro lahatsoratra nalaina tao amin'ny Lakroan'i Madagasikara, laharana 3928, 12 jolay 2015, izay efa tonga eny ampelatanan'ny mpanjifa nanomboka ny alakamisy 9 jolay teo. Ahitana ny fandaharam-potoana mikasika ny andro sy toerana lalovan'ny relikan'i Mb Terezy sy Louis ary Zélie Martin olontsambatra.
Mivahiny eto Madagasikara i Mb Terezy sy ny ray aman-dreniny
Nigadona teto Madagasikara ny relikan’i Mb Terezy sy Louis ary Zélie Martin, ray aman-dreniny tamin’ny zoma 1 jolay. Hitety diosezy maro izy ireo, mialoha ny hitondrana azy any Roma amin’ny 22 sepitambra, araka ny fandaharam-potoana efa voafaritra mialoha. Toa izao manaraka izao izany fandaharam-potoana izany.
FANDAHARAM-POTOANA MIARAKA AMIN’NY ORA
03 – 06/07/15
06 – 09 /07/15
09 – 11 /07/15
PORT - BERGE
11 – 14 /07/15
14 – 16 /07/15
17 – 19 /07/15
19 – 22 /07/15
23 – 30 /07/15
30/07 – 02/08/15
02 – 06 /08/15
06 – 08 /08/15
08 – 09 /08/15
09 – 12 /08/15
12 – 14 /08/15
14 – 18 /08/15
18 – 27 /08/15
27 – 30 /08/15
30/08 – 02/09/15
02 – 04 /09/15
04 – 06 /09/15
06 – 08 /09/15
08 – 09 /09/15
09 – 10 /09/15
FENERIVE – EST
10 – 11/09/15
11 – 18 /09/15
18 – 21 /09/15
21– 22 /09/15
DON BOSCO IVATO